I-WestJet ngoku ifuna ugonyo olupheleleyo lwe-COVID-19 kubo bonke abasebenzi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-WestJet ngoku ifuna ugonyo olupheleleyo lwe-COVID-19 kubo bonke abasebenzi
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Abasebenzi abasilelayo ukufakazela ubume babo bokugonywa nge-24 kaSeptemba okanye bafezekise ubume bokugonywa ngokupheleleyo ngo-Okthobha 30, 2021, baya kujongana nekhefu elingahlawulelwayo okanye ukupheliswa kwengqesho.
I-WestJet ibhengeza ugonyo olunyanzelekileyo kubo bonke abasebenzi.
Inqanaba elipheleleyo lokugonya liya kufuneka kubo bonke abasebenzi bexesha elizayo.
Umgaqo-nkqubo omtsha wokugonya uza kuqala ukusebenza nge-30 ka-Okthobha ka-2021.
I-WestJet Group namhlanje ibhengeze ukuba nge-30 ka-Okthobha ka-2021, bonke abasebenzi be-WestJet Group baya kucelwa ukuba bagonywe ngokupheleleyo kwi-COVID-19. Ukongeza, inqanaba lokugonya elipheleleyo liya kuba yimfuneko yengqesho yabo bonke abasebenzi bexesha elizayo abaqeshwe liQela leWestJet.
"Ukukhusela impilo kunye nokukhuseleka kweendwendwe zethu kunye nabasebenzi kuhlala kuyinto yethu ephambili kwaye izitofu zezona ndlela zokuzikhusela," utshilo uMark Porter, I-WestJet Sekela Mongameli oLawulayo waBantu. "Ukuhamba ngenqwelomoya yenye yezona mveliso zinzima kwaye sikholelwa ekubeni bafuna bonke abasebenzi beWestJet Group ukuba bagonywe yinto elungileyo ekufuneka beyenzile kwaye iqinisekisa indawo ekhuselekileyo yokuhamba neyokusebenza kuye wonke umntu kwihlabathi leWestJet."
Iqela le-WestJet liya kuvavanya kwaye lilungiselele abo baqeshwa bangenako ukugonyelwa i-COVID-19 nokuba kungokunyanga okanye kukhululwa. Abasebenzi abasilelayo ukufakazela ubume babo bokugonywa nge-24 kaSeptemba okanye bafezekise ubume bokugonywa ngokupheleleyo ngo-Okthobha 30, 2021, baya kujongana nekhefu elingahlawulelwayo okanye ukupheliswa kwengqesho. Njengenxalenye yesigunyaziso sayo sokugonya, i-airline ayizukubonelela ngovavanyo njengenye indlela yokugonya.
Qhubeka Porter, “Iqela le-WestJet lihleli lizinikele ekwakheni umva ngakumbi nangakumbi ukuze kuqinisekiswe ukuba kushishino lokuhamba ngenqwelomoya eCanada. Ukufuna ukuba bonke abasebenzi bagonywe i-COVID-19 kubalulekile ekuqalekeni okukhuselekileyo kohambo eCanada. ”
Ukusukela oko kwaqala ubhubhane i-WestJet Group yeenkampani zakhe inkqatho yamanyathelo okhuseleko ukuqinisekisa ukuba abantu baseKhanada banokuqhubeka nokuhamba ngokukhuselekileyo nangokuthembekileyo ngenkonzo yenqwelomoya yoKhuseleko lwayo yonke into. Ngeli xesha, iWestJet igcine ubume bayo njengenye yeenqwelomoya eziphezulu ezili-10 ngexesha laseMntla Melika njengoko kwathiwa ngu IKiriyamu.
UJohn Sneddon uthi:
NgoSeptemba 9, 2021 kwi-05: 11
Ngaba uyinkampani embi kangakanani, ndiyathemba ukuba imodeli yakho ye-fascistic iyasilela